दाङ । मुलुकमा माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध अन्त्य नहुँदो हो त उनको पृष्ठभूमि शायद फरक हुने थियो । यतिबेला उनी कुनै आक्रमण वा युद्ध भिडन्तका लागि योजना बनाउँदै हुने थिए । काँधमा बन्दुक र हातमा बारुद बोकेर उनी युद्धभूमिमा कि मर्न र मार्न तयार हुँदा हुन् ।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा दाङका घोराही–१४ झिगौराका लोकेन्द्र बुढामगरले बन्दुक उठाए । बन्दुकको नालमा क्रान्तिको सपना देखे । जीउज्यान नभनी परिवर्तनका निम्ति लडे । आज १८ वर्षपछि परिस्थिति ठीक उल्टो भइदिएको छ । एउटै कालखण्डमा दुई फरक–फरक जीवन बाँचेजस्तो । किनभने उनको हातमा अहिले बन्दुक होइन, फूल छ ।
एसएलआर र ग्रिनेड समाउने उनका हात अहिले फूल हुर्काउनमा व्यस्त छन् । फूलको हेरचाह गर्नु, तिनलाई गोडमोल गर्नु उनको दिनचर्या बनेको छ । पूर्व माओवादी लडाकू रहेका उनी बन्दुक बिसाएर तीन वर्ष यता व्यावसायिक फूलखेतीमा भुलेका छन् ।
क्रान्तिका लागि बन्दुक समाएका लोकेन्द्र कसरी फूल सामाउन पुगे ? यसको यकिन जवाफ उनीसँग पनि छैन । तर के हो भने भित्री मनमा कतै हिजो जनयुद्धका घाउहरु बिर्सन उनी शान्ति खोजिरहेका थिए र बाँच्ने आधार पनि ।
अनि बन्दुक समाए
रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका–७ जेलवाङ हो लोकेन्द्रको घर । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेला यो गाउँ निकै प्रभावित बन्यो । राज्यपक्षबाट ६३ र विद्रोही पक्षबाट १० गरी जेलबाङबाट ७३ जना मारिए ।
उनी स्कुल पढ्दै गर्दा मुलुकमा जनयुद्ध चर्कंदै थियो । माओवादीहरु गाउँगाउँमा संगठन विस्तार गर्दै जनमानसमा ढाडस दिन शुरु गरिसकेका थिए ।
यता, सामन्तहरुको बिगबिगी । आर्काेतिर त्यही उत्पीडनले जन्माएको माओवादीको नयाँ जनवादी क्रान्ति । उनको बालमस्तिष्कमा क्रान्तिको गहिरो प्रभाव पर्‍यो । देश बद्ल्नुुपर्छ भन्ने विद्रोह भाव सवार भयो । ‘त्यो परिवेश त्यस्तै थियो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘उत्पीडन र असमानताले धेरै मानिस जनयुद्धमा सरिक भइसकेका थिए ।’
त्यसमाथि प्रहरी र सेनाको ज्यादती उस्तै थियो । घरघरबाट प्रहरी र सेनाले अनेक दुःख दिन्थे । गाउँबाट मानिसहरु छोप्दै लिएर जान थालेका थिए । द्वन्द्व चर्कंदैै जाँदा गाउँका अनाहक सर्वसाधारणलाई घरबाटै समातेर मार्ने क्रम बढ्यो । त्यसपछि उनी भूमिगत भए । ‘गाउँमा कुनै पुरुष घर बस्ने सक्ने अवस्था थिएन,’ उनी ती दिन सम्झिन्छन्, ‘कति बेला प्रहरीले लैजाने हो र बेपत्ता बनाउने पत्तो नहुने ।’
उनी माओवादीको बाल संगठन हुँदै विद्यार्थी संगठनमा भूमिगत रहेर काम गरे । २०६० सालपछि भने उनी प्रत्यक्ष युद्धको भूमिकामा आए ।
पहिलो पटक बन्दुक समाउँदा उनको उमेर १८ वर्ष थियो । तर युद्धको उन्माद अर्कै हुने । बन्दुक समाउन पाए संसार जित्ने आँट आउँथ्यो । किशोरावस्था छँदा बन्दुक समाएका उनी त्यसपछिका थुप्रै प्रत्यक्ष युद्धमा ज्यानको बाजी थापेर लडे । उनलाई लाग्थ्यो, ‘बन्दुकको नालबाट मात्र क्रान्ति सम्भव छ ।’
तर युद्धको बाटो सजिलो थिएन । बन्दुक र गोला बारुद बोकेर जीवन दाउमा बोकेर हिँड्नुपर्ने । युद्धको धर्म थियो, कि मर्ने कि मार्ने । कति बेला सुरक्षा फौजको फन्दामा परिने हो पत्तो नहुने । संयोग भनौं, मुलुकमा भएको दशवर्षे जनयुद्धबाट उनी सकुशल फर्किए । ‘त्यति ठूलो युद्धबाट बाँचेर आइएछ,’ उनी विगत सम्झेर सुस्केरा काढ्छन् । हिजो युद्धका बेला बन्दुक बोकेर हिँडेका ती दिन । युद्धभूमिमा आँखै अगाडि ढलेका सहयोद्धाहरु । आज सम्झिँदा एउटा नमीठो सपनाबाट बिउँझिए जस्तो लाग्छ उनलाई ।
मुलुकमा युद्धबिराम हुँदा नहुँदै उनी खाडी मुलुकतिर हान्निए । आठ वर्ष खाडीको तातोमा बिताए । त्यसपछि उनी नेपाल फर्किए । २०६८ सालमा उनी फर्कंदा माओवादीले बन्दुक बिसाएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको थियो । जनयुद्धबाट मुलुक फेर्ने सपना देखाउने कमाण्डर र नेताहरु सत्तामा थिए । तर युद्ध लडेका सहयोद्धाहरु उपचार नपाएर छटपटाइरहेको उनले देखे । त्यसमाथि घाइते, अपाङ्ग, शहीद र बेपत्ता परिवारका आलो घाउ र आँशु उस्तै थियो । न त सोचेको जस्तो मुलुक परिवर्तन भएको थियो । बरु नेताहरु पो सत्तामा पुगे । ‘जुन आदर्श बोकेर हामी लड्यौं, त्यो पूरा भएन,’ उनले भने, ‘अहिले सम्झिँदा बेकार लडिएछ जस्तो लाग्छ ।’
खाडीबाट फर्किएपछि उनको मनले फेरि त्यहाँ जान मानेन । त्यहीबीच उनले फूलखेती गर्ने सोच बनाए । फूलप्रतिको मोह बढ्न थाल्यो । क्रान्तिका लागि बन्दुक समाएका उनी कसरी फूल सामाउन पुगे ? यसको यकिन जवाफ उनीसँग पनि छैन । तर के हो भने भित्री मनमा कतै हिजो जनयुद्धका घाउहरु बिर्सन उनी शान्ति खोजिरहेका थिए र बाँच्ने आधार पनि । त्यसैको विकल्पमा फूलखेतीलाई व्यावसायिक कर्मका रुपमा अँगाल्न पुगे ।
घोराहीको झिगौरामा तीन वर्षअघि व्यावसायिक फूलखेती शुरु गरे । त्यही फूलखेती अहिले बढेर जलजला पुष्पखेती फर्मका रुपमा सञ्चालनमा छ । जहाँ ७० बढी जातका फूल हुर्किरहेका छन् । त्यसमाथि करिब एक बिघा जग्गामा उनले हजारी फूलको खेती गरेका छन् । असारदेखि हिउँदसम्म उनी हजारी फूल फुलाउँछन् । तिहारदेखि विवाह, पूजा र पार्टी उत्सवहरुमा हजारी फूलको माग बढ्दो छ ।
सामूहिकबाट शुरु गरेर अहिले एक्लै फूलखेती गरिरहेका लोकेन्द्रलाई जीवन जिउने आधार मात्र बनेको छैन, फूल । हिंसात्मक युद्धबाट बन्दुक बिसाएपछि फूलखेतीबाट शान्तिको विम्ब समेत उनले पस्किरहेका छन् ।
बन्दुक र फूलको संगम
१८ वर्षको अन्तरालमा उनले क्रान्तिका निम्ति बन्दुक समाए र शान्तिका लागि फूल । हिजो बन्दुक समाउँदा उनीभित्र एक किसिमको विद्रोहको भाव सवार थियो । क्रान्तिबाट मुलुक बदल्ने सपना देख्थे । राज्यको नजरमा उनी विद्रोही थिए । विचार र भावना दुवै क्रान्तिकारी ।
तर उनको स्वभाव फरक छ । फूल समाएयता उनी शालिन छन्, विलकुल फूलजस्तै । हिजोजस्तो मस्तिष्कमा विद्रोहको भाव सवार छैन लोकेन्द्रमा । बोलीमा क्रान्तिकारी लवज होइन, विनम्रता झल्कन्छ । फूलले उनलाई यही कुरा सिकाएको छ ।
हिजो बन्दुक बोकेर युद्धमा हिँडेका दिनहरु सम्झिँदा कहिलेकाहीं उनलाई झस्काउँछ । मनमा बेचैनी र उकुसमुकुस हुन्छ । तब उनी टहलिन फूलबारीमा पुग्छन् । फूलहरु सुम्सुमाउँदै केहीबेर भुल्छन् । अनि उनको मनमा एक प्रकारको शान्तिको अनुभूति हुन्छ । सशस्त्र जनयुद्ध र खाडीमा पाएको दुःख फूलले बिर्साइदिएको छ । भन्छन्, ‘फूलसँग रमाउन पाउँदा सन्तुष्ट छु र खुशी पनि । जीवनमा केही गर्दा नपाएको आनन्द फूलखेती गर्दा पाएँ ।’
क्रान्ति नगरी मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा अहिले पनि उनलाई लाग्छ । तर अब कुनै बन्दुकबाट गरिने रक्तश्राप क्रान्ति भने होइन । उनी कृषि क्रान्तिको कुरा गर्दैछन् ।
‘परिस्थितिवस हिजो बन्दुक उठाउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अब त्यो क्रान्तिले हुँदैन । जनताको जीवन बदल्ने क्रान्ति जरुरी छ, जुन कृषिबाट सम्भव छ ।’ उनको भाषामा भन्दा हिंसात्मक क्रान्ति नभएर श्रम र शान्तिको क्रान्ति ।
विगतमा आफूले बन्दुक उठाउँदा देखेको परिवर्तनको सपना उनी अहिले फूलखेतीबाट सम्भव ठानेका छन् । हिजो बन्दुकको क्रान्तिबाट सम्भव नभएको सपना उनले आफ्नै बारीमा हुर्किरहेका फूलहरुमा देखिरहेका छन् ।
यता नेताहरु भने आज पनि समाजवाद र साम्यवादका सपना देखाइरहेका छन् । तर यी सबै कुरा उनलाई फगत लाग्छ । नेताका भाषण सुन्दा अचेल उनी दिक्क हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘हिजो जसले समाजवादका सपना देखाए । सत्तामा पुगेपछि त्यो सबै बिर्सिने रहेछन् । जसका निम्ति हिजो यति ठूलो युद्ध भयो, उनीहरुले त केही गर्न सकेनन् । अब झन् कसको विश्वास गर्नु र ?’ onlinekhabar.com
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, कार्तिक १९, २०७८, १२:५४:५१
जाजरकोटमा गाडी दुर्घटना: दुईको मृत्यु
विदेशमा रहेका नेपालीको पनि गणना गरिने ‘विदेशमा कति नेपाली छन् भन्ने विवरण राज्यसँग छैन, सही विवरण थाहा पाउन जनगणना एउटा अवसर हो’ विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ७० लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार छैन